कयिनको उदासीनता – Word of Truth, Nepal
“मेरो संसारै कालो बादलले ढाके जस्तै लाग्छ।”
यस अध्यायमा हामी एउटा उदास व्यक्तिको अध्ययन गर्नेछौं जसको नाम कैन थियो। हामी उसको उदासीनताको कारण पत्ता लगाउनेछौं अनि परमेश्वरको समाधानको उपायको बारेमा सिक्नेछौं।
आदम र हव्वाले एउटा छोरो जन्माए र उसको नाम ___________ (उत्पत्ति ४:१) राखे। याद राखौं, आदम र हव्वा पछि पापी बनेका हुन् तर कैन पापी भई जन्मेका थिए (भजनसंग्रह ५१:५ सित दाँज्नुहोस्)। तपाईं नि? आफूले पाप गरेर तपाईं पापी बन्नुभएको हो कि तपाईं जन्मले नै पापी हुनुहुन्छ? ________________________________।
उनीहरूले पाप गरेपछि आदम र हव्वाले आफ्नो लाज र पापलाई ढ़ाक्न खोजे (उत्पत्ति ३:७)। उनीहरूले आफ्नै हातका परिश्रमले आफ्नै पहिरन बनाए। परमेश्वरले त्यस “अञ्जिर-पाते पहिरन” लाई इन्कार गर्नुभयो। आज पनि मानिसहरू आफ्ना लाज र पापलाई ढ़ाक्न के-कस्ता प्रयास गर्ने गर्छन्?
कैनको पेशा के थियो (उत्पत्ति ४:२)?_________________________________________________।
कैनको बलिदान के थियो (उत्पत्ति ४:४)? ___________________________________________।
हिब्रू ११:४ हेर्नुहोस् – ” _________________द्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनको भन्दा उत्तम बलिदान चढ़ाए”। यसले देखाउँछ, कैनको बलिदान __________________द्वारा चढ़ाइएको थिएन। परमेश्वरले आदम र हव्वा लगायत तिनका छोराहरूलाई आफूलाई कस्तो किसिमको बलिदान मन पर्छ भनेर अघिबाटै सिकाउनुभएको थियो भन्ने देखिन्छ। विश्वासद्वारा हाबिलले ठीक किसिमको बलिदान ल्यायो तर कैनले भने ल्याएन।
मानौं तपाईं कैन हुनुहुन्थ्यो। तपाईं गोठाला नभईकन एक किसान हुनुभए तापनि, ठीक किसिमको बलिदान चढ़ाउनका निम्ति तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? हाबिलले केही फलफूल र अन्नको सट्टामा तपाईंलाई एउटा भेडा दिँदैन्थ्यो होला र?
कैनको बलिदानले मुक्ति प्राप्तिका लागि मानिसको उपाय (धर्मको काम) को कसरी चित्रण गर्छ? हाबिलको बलिदानले परमेश्वरबाटको मुक्तिको उपाय (मुक्तिको दान) को कसरी चित्रण गर्छ? जोडा मिलाउनुहोस्:
______ कैनको बलिदान
(क) मानिसको उपाय — धर्मको काम
(ख) परमेश्वरको उपाय — मुक्तिको दान
जब परमेश्वरले कैनको बलिदान इन्कार गर्नुभयो, तब दुइटा कुरा भए (उत्पत्ति ४:५):
कैन ज्यादै ____________ (रिसाए, तात्तिए)
कैनको मुख _______________ भयो। यसको मतलब तिनी खिन्न भए, निरुत्साहित बने। तिनलाई औड़ाहा भयो!
“म खिन्न छु! किन मलाई यस्तो आइपरेको?”
यदि कैनले ठीक किसिमको बलिदान ल्याएको भए के ऊ उदास बन्नुपर्नेथ्यो? उसले गलती गर्‍यो, यसैकारण उसलाई खिन्न लाग्यो। गलती गराइले गलत भावना उत्पन्न गराउँछ। साथै हामी सिक्नेछौं, उदास भई बसेर समस्याको समाधान हुने होइन।
परमेश्वर तुरुन्तै कैनसित कुरा गर्नुभयो; ऊ रिसाउनु आवश्यक छैन, उदास हुनुपर्दैन भनी उहाँले उसलाई बताउनुभयो (उत्पत्ति ४:६-७)। परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो, “यदि तैंले जे ठीक छ त्यो गरिस् भने तँ ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र (उत्पत्ति ४:७)?” यस पदलाई हिब्रूबाट अक्षरशः रूपान्तरण यसरी गर्न सकिन्छ:
“यदि तैले जे ठीक छ त्यो गरिस् भने तेरो मुख उचालिनेछैन र?”
कैनको मुख खसेको थियो (उत्पत्ति ४:५) तर परमेश्वरले कैनलाई त्यसको आवश्यक समाधानको उपाय के हो बताउनुभयो! उसको मुख कसरी उचालिन सकिन्छ भनी परमेश्वरले उसलाई बताउनुभयो! उसको मुख उचालिन (उदासीनताबाट छुटकारा पाउन) कैनले के गर्नुपर्थ्यो? ___________________________________________________ ____________________________________।
परमेश्वरले यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “तिमीले ठीक काम गरे तिम्रो मन ठीक हुनेछ!” हाम्रो मनका भावनालाई स्वस्थ राख्ने चाबी सरल छ: जीवन ठीक भए, मन ठीक हुन्छ।
उदासीनता भनेको मान्छेलाई एक्कासी छोप्न आउने कुनै विचित्रको शक्ति होइन नत्र ता यसबारे हामीले केही पनि गर्न सक्दैनथ्यौं। परमेश्वरले कैनलाई यसबारे उसले गर्न सक्ने एउटा काम थियो भनी भन्नुभयो — “जे ठीक छ त्यो गर!”
पापको भुमरीमा कैन
कैनले “ठीक” गरेन। उसले उल्टो गर्‍यो। उसले पापमाथि पाप थप्‍यो। उसको समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गयो। पापको भुमरीमा परेको कैनको क्रमिक पतनलाई यहाँ विचार गरौं:
ऊ पापको दलदले हिलोभित्र झन् झन् फस्न थाल्छ। कैनले “ठीक” गर्न इन्कार गरिरह्यो। दाऊद पनि यस्तै पापको भुमरीमा परेका थिए (२ शमूएल ११ मा हेर्नुहोस्)।
दाऊदले आफ्नो पाप स्वीकार गर्‍यो र पश्चात्ताप गर्‍यो (भजनसङ्ग्रह ५१ र ३२) र फलस्वरूप आफ्नो गिरावटको क्रमलाई रोक्‍न सक्यो। तर कैनले कहिल्यै पाप स्वीकार गरेन, कहिल्यै पश्चात्ताप गरेन।
१ यूहन्ना ३:१२ बाट कैनको बारेमा हामी के सिक्छौं? _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________
प्रायः जसो मानिसहरू मनका भावना र आवेगको नियन्त्रणमा चल्ने गर्छन् र फलस्वरूप नराम्रै परिणाम भोगिरहेका हुन्छन्। “किन त्यसो गरेको?” भनेर सोध्दा धेरैले “त्यस्तै गरूँ-गरूँ लाग्यो!” भन्ने जवाफ दिन्छन्।
हरेक दिन निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै हुन्छन् जुन निर्णयहरू आफ्ना भावनाका आधारमा नभई परमेश्वरको वचनको आज्ञा भएको आधारमा गर्नुपर्छ। गर्न मन नलाग्ने कुराहरू त्यहाँ थुप्रै हुन्छन्। अब दुइटा तरिकामा जीवन जिउन सकिन्छ। एउटा तरिकाले भन्छ, “म भावनाअनुसार जिउनेछु, मलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्नेछु।” त्यो हो भावनाअनुसार जिउने तरिका। अर्को तरिकाले भन्छ, “म परमेश्वरले भन्नुभएअनुसार जिउनेछु। जुन कुरा सही छ त्योअनुसार म गर्नेछु, मेरो भावनाअनुसार होइन। मनमा जे लाग्यो त्योअनुसार गर्नुको सट्टा म पहिले विचार गर्नेछु र परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्ने निर्णय गर्नेछु।” यो हो विश्वासअनुसार जिउने तरिका (परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएअनुसार गर्ने तरिका)। हामी कुन तरिकाले जिऔं त? भावनाले कि विश्वासले?
लूका १७:७-८ मा येशूले एउटा सुहाउँदो दृष्टान्त बताउनुभयो। एउटा नोकर दिनभरिको खेतको परिश्रमले बेसरी भोकाएर आएको छ। मालिकले उसलाई खाना पकाएर पस्कने आदेश दिएका छन् र मालिकले खाना खाइसकेपछि मात्र उसले खानपीन गर्न पाउनेछ। आफूले पकाउँदै गरेको खानाको मीठो बास्ना लिँदा उसको भावनाले उसलाई के गरूँ-गरूँ जस्तो बनाउँछ होला? _____________________________________। यसकारण उसले अब एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ: “म आफ्नो भावनाले भनेझैं गरूँ र अहिले नै खाना खाइदिऊँ कि म आदेश दिएबमोजिम गरूँ?” उसले कुनचाहिँ निर्णय गर्‍यो (लूका १७:९)? ____________________________________________________। पछि, आफ्नो मालिकले भोजन गरिसकेपछि नोकरले आफूले सही निर्णय गरेको र आफ्नो मालिकको इच्छा पूरा गरेको भन्ने कुरामा भित्री सन्तुष्टि र आनन्द लिँदै आफ्नो खाना खान सक्नेछन्। अनि त्यसबेला सम्म त उसलाई भोक पनि झनै लागिसेको हुनाले आफ्नो भोजन उसलाई झनै मीठो लाग्नेछ!
कैनले सिक्न नसकेको पाठ हामी सिकौं! “तिमीले जे ठीक छ त्यो गर्‍यौ भने, तिम्रो मुख उचालिने छैन र?”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-04 16:39:312020-04-28 14:41:16कयिनको उदासीनता
हव्वाले धोका खाई यस पृष्ठलाई...धूर्त याकूब